Abenzi bemikhiqizo, Abahlinzeki | Ifektha yemikhiqizo yase China
I-DZH Ukupheka amalahle i-Boiler yamukela izakhi zokudlulisa ukushisa eziphezulu - ipayipi eligoqiwe, ngesilinganiso esifanelekile sokugeleza kweflue, ukusebenza kahle kwe-boiler kuphezulu kunamazinga kazwelonke ochwepheshe 6 ~ 8%
I-Single Drum Hot Water Boiler
I-DZL yochungechunge i-single Drum Hot Water boiler yamukela isakhiwo sethafa lepayipi; thuthukisa izinga lokuphepha kwamandla, ilunga le-bracing elenziwe lula.
I-Single Chain Fix Chain Coal edubule i-steam boiler izondla ngesandla amalahle futhi ifanele uphethiloli wenani eliphansi.
I-Biomass Hot Water Boiler
I-Biomass Hot Water boiler iyindawo evuthayo yamapayipi omlilo wamanzi amathathu emuva. Uphethiloli ungaba yiBiomass, amalahle, izinkuni, irayisi isigaxa, amagobolondo, amapellets, bagasse, imfucuza njll.
I-Wood Biomass boiler iyisimo esilinganayo se-boiler samanzi sokubuyela emuva samanzi esiyi-composite. Amafutha e-boiler angasetshenziselwa i-chip chip, i-log log bese uxuba nezinye i-biomass namalahle.
I-Insurance Technology Service izonikezwa yi-XUZHOU DOUBLE RINGS MACHINERY CO., LTD ukugcina umkhiqizo wethu ukhwalithi enhle.
Amalahle we-Boiler Biomass Boiler Chimney
Ishimula isakhiwo esinikeza umoya wentuthu eshisayo noma intuthu evela kubhayela, isitofu, isithando somlilo noma indawo yomlilo.
I-chimney ivame ukuma mpo, noma isondele kakhulu mpo ngangokunokwenzeka, ukuze iqinisekise ukuthi amagesi ahamba kahle, adonsela emoyeni kulokho okwaziwa ngokuthi ukushiswa kwe-chimney noma umphumela we-chimney
I-Double Drum Hot Water Boiler
I-Double Drum Hot Water Boiler SZL Series iqoqene amanzi ishubhu boiler isebenzisa i-longitudinal Double isigubhu se-chain boiler.